2009-09-27 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Virus ​ကြောင့် ​ပျောက်​နေ​တဲ့ Tools ​တွေ​ကို ​ဘယ်​လို ​ပြန်​ပြင်​လို့​ရ​နိုင်​မ​လဲ
​မေး​တာ​က​တော့ ​လူ​အ​တော်​ကို ​များ​နေ​ပါ​ပြီ . Folder option ​ပျောက်​ရ​တာ​နဲ့ Run Box ​ပျောက်​ရ​တာ​နဲ့ ​အ​မျိုး​မျိုး​ပါ​ပဲ . ​အ​ခု​ဒါ​လေး​က​တော့ ​လွယ်​လဲ​လွယ်​တယ် . ​သုံး​ရ​တာ​လဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​တယ် . ​ကဲ​သုံး​ကြည့်​လိုက်​ပါ​ဦး . ​သူ​ပြန်​ဖော်​ပေး​နိုင်​တဲ့ (၁၀)​မျိုး​ကို ​အောက်​မှာ ​ရေး​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော်​တို့​လဲ ​အဲ့​ဒီ့ ​ဟို​ဟာ​ပျောက်​လိုက် ​ဒီ​ဟာ​ပျောက်​လိုက်​နဲ့ ​ပြန်​ပြန်​လုပ်​နေ​ရ​တဲ့ ​ဒု​က္ခ​က​လဲ ​မ​သေး​လှ​ပါ​ဘူး . ​တစ်​ခါ​တစ်​လေ ​လုံး​ဝ​သုံး​မ​ရ​လို့ ​ဝင်း​ဒိုး​အ​သစ်​ပြန်​တင်​ရ​တဲ့​အ​ခါ​တွေ​လဲ ​ဒု​နဲ့​ဒေး​ပါ . ​ကျွန်​တော်​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​ဖို့​ကို​ပါ ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . ​သူ​က​လွယ်​ပါ​တယ် . enable ​ပေး​လိုက်​တာ​နဲ့ ​ပြန်​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် ..
zaw2aung: ​ညီ​ရေ RPD 10 ​ကို ​သုံး​တာ restart ​ကျ​ကျ​သွား​တယ်​ကော ​စစ်​တာ​ကို​လဲ​မ​သိ​ရ​ဘူး ​သုံး​ပုံ​လေး​ရှင်း​ပြ​ပါ​ဦး
​အောက်​မှာ​ပုံ​နဲ့​ပြ​ထား​ပါ​တယ် . ​ဖိုင်​ပြန်​စီ​တာ​က ​လွယ်​ပါ​တယ် .. .
zaw2aung: ​ညီ​ရေ ​အဲ​လို​တော့​ရ​တယ်​လေ ​အ​ခု​ဟာ​က file select > Start ​ဆို ​ရင် restart ​ကျ​ကျ​သွား​တယ်​လေ​အဲ​လို​ဖြစ်​နေ​လို့​ပြော​ပြ​တာ ​ကို့​စက်​က​ပဲ​ဖြစ်​တာ​လား​မ​သိ​ဘူး ..
zaw2aung ​ရေ ​ဒီ​ပို့စ် ​က​အ​တိုင်း HDD ​ရဲ့ bad sector ​ကို fixed ​လုပ်​လိုက်​ပါ​ဦး . ​ပြီး​တာ​နဲ့ restart ​ချ​ဖို့ ​မ​မေ့​ပါ​နဲ့ . bad sector ​ကို fixed ​လုပ်​ပြီး​တိုင်း restart ​ချ​ပေး​ရ​ပါ​မယ် . bad sector ​ကို fixed ​လုပ်​ပြီး​မှ ​ဖိုင်​ပြန်​စီ​လိုက်​ပါ ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​ပါ​လိမ့်​မယ် .
Zaw gyi ​ကို vista ​မှာ ​တင်​တာ ​အ​ဆင်​ပြေ​စေ​ဖို့ .
istar: ​အ​ခု​ကျွန်​တော်​သုံး​နေ​တာ window vista ​ပါ.. ​ကျွန်​တော့် window ​မှာ ​ဇော်​ဂျီ​ဖောင့် ​ကို install ​လုပ်​တာ​မ​ရ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​လို့​ပါ .
​ကျွန်​တော် ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . Vista ​အ​သုံး​ပြု​သူ​များ ​အ​ဆင်​ပြေ​နေ​ကြ​တဲ့ zawgyi ​ကို ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​တစ်​ခု​နဲ့​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ရင် ​နောက်​တစ်​ခု ​ထပ်​စမ်း​ပါ . ​များ​သော​အား​ဖြင့်​တော့ Blogger Day Zawgyi ​နဲ့​အ​ဆင်​ပြေ​ကြ​တာ ​များ​ပါ​တယ် . ​အောက်​မှာ ၂ ​ခု​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​ရင် ​ပြန်​အော်​ခဲ့​ပါ .
Blogger Day Zawgyi >> Download
​ကဲ ​အဲ့​ဒါ​နဲ့​မှ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​သေး​ရင် ​ဒီ​ကို ​သွား​ပြီး​တော့ Zawgyi Myanmar Unicode Keyboard L ​ကို ​ဒေါင်း​လိုက်​ပါ